Paingotra miloko matevina & decals ho an'ny zazavavy famolavolana vaovao-Solid Colors-Shanghai HUIZI digital
1.Factory mpamatsy mivantana sy kalitao miaraka amin'ny vidiny mifaninana.
2.Tavaky ny famolavolana amin'ny tahiry ary raiso OEM / ODM.
3.100% ny fantsika polosy, tsy manapoizina, mifehy tena.
4. serivisy tsara.
Nail sticking, Nail wraps, 100% pantsika polish fantsika
Ny fonosana kitapo vacuum, 10strips / PC, 2PC / kitapo
Fampandrenesana fantsom-bolo vita amin'ny fantsika fantsika 2020
HUIZI sticker fantsika hatsaran-tarehy fantsika 2d sticker fametaka fantsika poleta
Zarao ny 2021 fantsakanana fantsika jamberry fantsika loko mametaka fantsika
2021 New Selling Polisy Nail Polisy Vaovao, 16pcs / strips Nail Wrap, mpamatsy Art Glitter Nail